अब के गर्दछन् डा. केसी - samayapost.com
अब के गर्दछन् डा. केसी
समयपोष्ट २०७५ साउन १२ गते २:३१
आजको नेपाल समाचारपत्रले विशेष सम्पादकीय छापेको छ ।
जनताको भावनासँग गाँसिएका कुनै पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकारसँग भएको दुई तिहाइको दम्भ र घमण्डले मात्र पराजित गर्न नसकिने रहेछ भन्ने कुराको ठूलो उदाहरण बनेको छ डा। गोविन्द केसीको सत्याग्रह ।